Tirada yar ee ka lacag badan dunida inteeda kale | shumis.net
Home » News » Tirada yar ee ka lacag badan dunida inteeda kale
Hogaamiyayaasha adduunka eek u sugan Davos todobaadkan waxay ka hadlayaan dhaqaalaha dunida.
Mid ka mid ah qodobada ay ka hadli doonaan waxaa ka mid ah sinnaan la’aanta lahaanshaha hantida, oo qaar badan rumaysan yihiin in ay tahay dhibaato sii kordhaysa.
Credit Suisse, oo ah bangi Swedish ah, ayaa soo daabaca warbixin sanadeed ku saabsan maalka dunida, faallo ku saabsan halka ay ku badan yihiin adduunka dadka ugu taajirsan dal ahaan iyo diin ahaanba.
Hadaba, sidee isugu dhigmaan gobolada qaniga ah iyo kuwa saboolka ah, iyo sida ay isku badalayaan? Qariidadan ayaa muujinaysa sida maalka dunida uu ahaa 2015, sida ay sheegayso
Waqooyiga America ee Qaniga ah
Maraykanka iyo Canada ayaa wali ah gobolka adduunka ugu qanisan, sida ay sheegayso Credit Suisse Lahaanshaha: Thinkstock Adduunka maalkiisu wuxuu ku uruursan yahay Maraykanka, Canada iyo Yurub. Credit Suisse ayaa xisaabisay in celceliska hantida qofka qaangaarka ah ee Waqooyiga Ameerika - oo aan lagu darin Mexico, oo lagu tiriyo Latin Ameerika - wuxuu dhan yahay $342,000.
Hanti ayaa lagu qeexaa dhamaan alaabta, kaydka iyo guryaha, oo laga gooyay daynta.
Waxay tan ka badan tahay in aad iyo aad u badan dunida inteeda kale. Waa qiyaas ahaan ilaa 75 jeer mid ka badan celceliska qaaradda Africa iyo India, waxay 15 jeer ka badan tahay Shiinaha iyo Latin Ameerika. Waxay qiyaasta hantidaas ka badan tahay 2.5 celceliska milkida qaaradda Europe.
Waa in xisaabta lagu daraa in warbixintu ay adeegsatay doolarka Maraykanka si udub dhexaad ah, mana isticmaalin awoodda sinnaanta wax iibsiga, marka ma jirto hab lagu xukmin karo saamaynta qiimaha nolosha uu ku leeyahay hantida.
Si kale hadii oo yiraahdo, waxaa dhici karta in aad doolar badan ku haysato Maraykanka, balse lacagtaas waxaa dhici karta in aysan kuu iibin badeeco u dhiganta ama adeeg la mid ah kan aad kaga heli lahayd gudaha dalka Maraykanka, dalalka qaarkood marka la eego.
Maadaama hantida guryuhu tahay mid muhiim u ah milkida, qiimaha guryaha ee gobollo kala duwan ayay dhici kartaa in ay kaalin wayn ka tahay sinnaan la'aanta jirta.
Tirada ayaa sidoo kale adeegsanayn celcelis hanti (waa isu gaynta hantida oo loo qaybiyay tirada dadka qaangaarka ah).
Waxaa macnuhu yahay in Dadka aadka qaniga u ah waxaa dhici karta celceliska hantidooda marka la isku geeyo in ay aad uga sarayso inta badan dadwaynaha.
Halkee ku nool yihiin 1% ee ugu wada saraysa?
Tirada kuwa ugu taajirsan ee UK degan waa ku dhowaan 25% sanadkii la soo dhaafay sida ay sheegtay Credit Suisse Lahaanshaha: Thinkstock
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa halka 1%-ka ugu qanisan ee dadwaynaha ay ku nool yihiin - Taajirka taajir dhaafay.
Tobanka dalka ee ugu sareeya ee ay degan yihiin 1%-ka ugu taajirsan dunida
1. USA 20,680,000 (in ku dhow 15% 2014) 2. UK 3,623,000 (in ku dhow 25%) 3. Japan 3,417,000 (ka hooseeya in ka badan 15%) 4. France 2,762,000 (ka hooseeya in ku dhow 22%) 5. Germany 2,281,000 (ka hooseeya in ka badan 17%) 6. China 1,885,000 (Ka sareeya in ka badan 19%) 7. Italy 1,714,000 (ka hooseeya in ku dhow 25%) 8. Canada 1,500,000 (dKa hooseeya in ka badan 7%) 9. Australia 1,480,000 (hooseeya ilaa 17%) 10. Switzerland 831,000 (Ka sareeya in ka badan 3%)
Tirada ayaa muujinaysa in tirada dadka ugu taajirsan ee Shiinaha ay sii korayso ilaa 19%, Waqooyiga America (sare u kacday ilaa 20%) iyo UK (sare u kacday ku dhowaad 25%), hoosna u dhacaysa meelaha kale, gaar ahaan dhaqaalayaasha waawayn ee Yurub, Japan iyo Australia.
Waa macnuhu noqon karaa in dhaqaalaha sii koraya ee Shiinaha uu soo saarayo milyaneerro hore leh, ama taajirka taajir dhaafay uu ka faa'iidaysanayo caasimadda guur guura si uu ugu soo guuro ruggaha maaliyadeed ee adduunka sida London iyo New York. Balse is rog rogga hantida guryaha ayaa sidoo kale yeelan karta saamayn dhab ah.
Hadii aan hanti guri ah ku leedahay London oo aadan daynta guriga gudaynin, tusaale ahaa, waxaad ku dhow dahay in laguugu tilmaami karo "taajir sare", marka la eego sida ay wax u xisaabisay Credit Suisse.
Title: Tirada yar ee ka lacag badan dunida inteeda kale